ပြင်သစ်နိုင်ငံ CEVA နှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံ Polchem တို့ပူးပေါင်းထားသော CEVA POLCHEM ကုမ္ပဏီမှ ထုတ်လုပ်၍ မြန်မာနိုင်ငံ Pyae Thitsar Aung ကုမ္ပဏီမှ တင်သွင်းဖြန့်ချိ့နေသော တိရစ္ဆာန် ဆေးဝါးများ
BIO - SEL- E
Biotin (Vit H), Selenium, Vitamin E
ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးနောက် ခုခံစွမ်းရည်ပေးသော စနစ်အား လှုံ့ ဆော်ခြင်းဖြင့် အမြန်ဆုံးအစွမ်းဖြစ်စေခြင်း၊ ကြီးထွားနှုန်းကောင်းစေပြီး ရောဂါခုခံစွမ်းရည် မြှင့်တင်စွမ်းနှင့် မျိုးအောင်နှုန်းမြှင့်ဆေး ရောဂါကာကွယ်နှုန်းမြှင့်စေခြင်း ကြက်/ငှက် တိရစ္ဆာများတွင် သဘာဝခြခံနိုင်စွမ်း ကြီးမားစေခြင်း၊ အရေပြား‌ရောင်ရမ်းခြင်းရောဂါမှကာကွယ်ခြင်း၊ မျိုးအောင်နှုန်းမြှင့်မားစေခြင်းနှင့် ဥတွင်းသန္ဓေသားသေဆုံးမှုနည်းပါးစေခြင်း။
ကြက်ငယ်/ ကြက်လတ်/ဥစားကြက် - အကောင်ရေ ၂၀၀ လျှင် ဆေး 50 gm နှုန်း ‌ရေဖျော်၍တိုက်ရန် (သို့မဟုတ်) အစာတစ်တန်လျှင် ဆေး 150- 200 gm နှုန်း။
အသားစားကြက် - အကောင်ရေ ၅၀ လျှင် ဆေး5gm နှုန်းဖြင့် ရေဖျော်၍တိုက်ရန်။
မျိုးကြက် - အ‌ေကောင်ရေ ၅၀ လျှင် ဆေး 10 gm နှုန်းဖြင့် ရေဖျော်၍တိုက်ရန်.
ထုပ်ပိုးပုံ - 200 gm ထုပ်
POL - C
Heat Stress ကို လျှော့ချပေးရန်။
ကြက်ဥခွံ့ပါးခြင်းနှင့် ကြက်ဥကွဲခြင်းတို့မှ ကာကွယ်ရန်။
မျိုးလိုက်ကြက်ဖများ၏ သုတ်ပိုးကာင်ရေ များစေရန်နှင့် မျိုးအောင်နှူန်း မြှင့်စေရန်။
မှိုကြောင့်ဖြစ်တတ်သော အဆိတ်အသောက် ပြေစေရန်။ သောက်ရေ၏ အနည်ဓါတ် ပိုမိုကြည်လင်စေရန်။
အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 100 gm နှုန်း
ကြက်အကောင် ၁၀၀၀ လျှင် ဆေး 20gm ရေဖျော်၍တိုက်ပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ - 1Kg ထုပ်
BIO - LIV FORTE
Liver Extract, Protein Hydrolysate, Tricholine Citrate , Inositol, Biotin , Vitamin B12, Vitamin E, Selenium, Methyl Donor
Hepatic Tissue များ နုပျိုရွှင်လန်းစေခြင်း။
အသည်းဆီဖုံးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးခြင်း။ ကျောက်ကပ်/ အသည်းရောဂါများအား ကာကွယ်ပေးခြင်း။ ။
အမွေး / အတောင် စုံလင်မှုမှန်ကန်စေခြင်း။
ကြက်ကောင်ရေ ၁၀၀ အတွက် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ဆက်တိုက်ပါ။
ကြက်ပေါက် -5ml နေ့စဥ်
အသားတိုးကြက် - 10 ml နေ့စဥ်
ကြက်လတ်နှင့် ဥစားကြက် - 20 ml နေ့စဥ်
မျိုးကြက် - 25 ml နေ့စဥ်
Methionionine, Activity, Choline Choride . Lysone Hydrochioride
- Calcium, Magnesium, Iron,Manganese, Zine , Copper,Cobait Electrolytes
- Sodium as Chloride,Potassium as Chloride
ကြက်ဥ အရည်အသွေး တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်။
အစာမှ အသားတိုးနှုန်း ကောင်းမွန်စေရန်။
ရာသီဥတုဒဏ်နှင့် အခြားသောဒဏ်များ မဖြစ်စေရန်။
ကြက်ကောင်ရေ ၁၀၀ အတွက် ၃ ရက်မှ ၅ ရက်ဆက်တိုက်ရန်။်၅ - ၇ ရက် ဆက်တိုက်ရန်။
ကြက်ပေါက် -5mlရန်။
ကြက်လတ် - 10 ml
ဥစားကြက် - 20 ml
အသားစားကြက် - ၂ပတ် သားနှင့်၃ပတ်သားတွင် 10 ml နှုန်း ၅ပတ်သားနှင့်၆ပတ်သား တွင် 15 ml နှုန်း။
Amino Acids, Lysine, Histidine, Arginine, Aspartic, Acid, Threonine, Serine,Glutamic, Acid,Proline, Glycine,Chelated ,Minerals, Calcium, Magnesium, Iron, Manganese, Zinc, Cobalt, Electrolytes, Sodium, as Chloride, Potassium, as Chloride,Alanine, Valine, Methionine,Isoleucine, Leucine,Tyrosine, Phenylalanine, Tryptophan, Cystine.
အစာမှ အသားတိုးနှုန်း ကောင်းမွန်စေရန်.
ကြက်အကောင်ရေ ၁၀၀၀ အတွက် အစာတန်ဖိုး ကုန်ကျငွေသက်သာစေရန်။
ကြက်ပေါက်/ကြက်လတ် - အကောင်ရေ ၁၀၀ လျှင်ဆေး 15 ml နှုန်းဖြင့် ၅ရက်ဆက်တိုက်ရန်၊ ၁၀ ရက်ကြာတိုင်းထပ်မံတိုက်ရန်။ဆက်တိုက်ရန်။
ဥစားကြက် - အကောင်ရေ ၁၀၀ လျှင် ဆေး 30 ml နှုန်းဖြင့်တစ်လလျှင် ၇ရက်ဆက်တိုက်ရန်။
အသားတိုးကြက် ၁၀၀ ဆေး15ml နှုန်း၅ပတ်သားနှင့် ၆ပတ်သားတွင် တစ်ရက်လျှင့် ကြက်အကောင်ရေ ၁၀၀ တွင် ဆေး 30 ml နှုန်း။
၅ ပတ်သားနှင့် ၆ ပတ်သားတွင် တစ်ရက်လျှင် ကြက်အကောင်ရေ ၁၀၀ တွင် ဆေး 30 ml နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ 1Liter ဘူး
P- 101 (Most Versatile Biocide)
မွေးမြူရေးခြံများအတွက် ပထမဆုံး အရေးတကြီးလုပ်ဆောင်ရန်မှာ Biosecurity ခေါ်ဇီဝလုံခြုံရေးနှင့် ကူးစက်တတ်သော ရောဂါဖြစ်စေသည့် Microorganism ကင်းစင်ရေးဖြစ်ပါသည်။
ပိုးသတ်ဆေးအမျိုးမျိုးရှိသည့်အနက် Ceva Polchem မှထုတ်သော P-101 နှင့်မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါသည်။
Didecyl Dimethyl Ammonium Chloride 9.2% w/v
Benzalkonium Chloride Solution IP 13.8% w/v
Bis-n-Tributyl-tin Oxide 1.0% w/v
Didecyl Dimethyl Ammonium Chlorde (DDAC) သည် အလွန်ကျယ်ပြန့်စွာ အသုံးဝင်သော Bacteriocidal, Fungicidal ဖြစ်ရုံသာမက Algae နှင့် Oocyst တို့ကိုပါ သတ်နိုင်သော အစွမ်းရှိပါသည်။
Benzalkonium Chloride သည် ရောဂါဖြစ်စေသော Microorganism များကို ပိုးသတ်ပေးပါသည်။
Bis-n-Tributyl-tin Oxdide သည်လည်း ဘတ်တီးရီးယားအားလုံး၊ ဗိုင်းရတ်စ်အားလုံး နှင့် Fungus ခေါ် ရောဂါပိုဖြစ်စေသော မှိုအားလုံးတို့အား သတ်နိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
Versatile ဟူသော စွယ်စုံပိုးသတ်ဆေးဖြစ်ဖသာကြောင့် Biosecurity လုပ်ငန်းများ၊ ခြံသန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပိုးသတ်ဆေးဖျန်းခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ခြံသုံးပစ္စည်းများအား ဆေးကြောသန့်စင်ခြင်း၊ ပိုးသတ်ခြင်းတို့အတွက် အထူးအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်။
မွေးမြူရေးအတွက် မွေးကောင်များမရှိသော အချိန်တွင်အသုံးပြုပါက ရေ (၁) လီတာတွင် ပိုးသတ်ဆေး (၄)စီစီ ထည့်၍ high pressure ဖြင့်ဖျန်းပေးပါ။
မွေးကောင်(ကြက်များ)ရှိနေသောခြံဖြစ်ပါက ‌ရေ(၁) လီတာတွင် ပိုးသတ်ဆေး (၄)စီစီနှုန်းဖြင့် ဖျော်၍ high pressure ဖြင့် မျက်နှာကြက်သို့ ဖျန်းပေးပါ။
ပလပ်စတစ်နှင့် သတ္တုပစ္စည်းများအတွက် အသုံးပြုလိုပါက အထက်ပါနှုန်းအတိုင်းပြုလုပ်၍ ၁၀ မိနစ်ခန့် စိမ်ထားပြီးမှ လေတွင်အခြောက်ခံပါ။
ကြက်ဥဖောက်စက်နှင့် ဝပ်စက်တွင် သုံးလိုပါက ရေ (၁) လီတာတွင် ပိုးသတ်ဆေး (၅၀)စီစီနှုန်းဖြင့်ဖျန်းပါ (သို့) အဝတ်တွင်ဆွတ်၍သုတ်ပေးပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ -1Liter ဘူး
AQUAQUAT - SUPER
Benzalkonium Chloride Solution IP, Citric Acid IP, Aqueous Base
Acidifer ပိုးသတ်ဆေးရည်နှင့် ရေပိုက်လိုင်း ချေးချွတ်ဆေး
ကြက်၊ ငှက်ရှိနေစဥ်အတွင်းလည်း အသုံးပြုနိုင်ခြင်း
လောင်စားစေခြင်း အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေခြင်း၊ ယားယံခြင်းတို့မဖြစ်ပေါ်စေခြင်း
ငွေကုန်ကြေးကျ သက်သာစွာ အသုံးပြုနိင်ခြင်း
အချိန်ကုန် လူပင်ပန်းမှုများ သက်သာစေခြင်း
ကြက်၊ ငှက် သောက်သုံးရေများတွင် သောက်ရေ 10 Liter လျှင် ပိုးသတ်ဆေး 1 CC ဖျော်၍ နေ့စဥ်တိုက်ရန်။
ရေပိုက်လိုင်းများအတွင်းမှ သံချေးများကွာကျစေရန် ရေပိုက်လိုင်းအတွင်း ရောဂါပိုး သန့်စင်စေရန်။
ကြက်မရှိချိန်ဖြစ်ပါက ရေ 1 Liter နှင့် ဆေး 50 CC နှုန်းဖျော်၍ ရေကို ၈နာရီခန့် သိုလှောင်ပြီး ရေများအား ဖွင့်ချပေးပါ။
ကြက်ရှိနေပါက သောက်ရေ 1 Liter ၌ ပိုးသတ်ဆေး 1 CC နှုန်းဖြင့်ဖျော်၍ တစ်ပတ်လျှင် ၈နာရီ မှ ၁၀ နာရီထိရေတိုက်ပေးပါ။
ထုပ်ပိုးပုံ -1 Liter ဘူး
Food Grade Colour,Special Chlorine Deactivators
သောက်ရေတွင် ပါဝင်သော Chlorine ကို လုံးဝကင်းစင်စေခြင်း။
သောက်ရေတွင် ချက်ချင်း လုံးဝပျော်ဝင်ခြင်း၊ အတုံးအခဲလေးများ မရှိတော့သဖြင့် ရေသောက်ရာတွင် ဆို့နှင့်မှုမရှိခြင်း။
နှုတ်သီးတွင် ဆေးပြာရောင်စွန်းထင်းမှု အနည်းဆုံး ၁၀နာရီခံစေသောကြောင့် ကာကွယ်ဆေးသောက်ထားမှုကို သိသာစေခြင်း။
ဆေး 20 gm လျှင် ရေ 100 Liter နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ 20 gm 10 Sachets inabox
Phosphatidylcholine, Lysophosphatidylcholine,Polyethyleneglycol Ricinolcate (PEER)
Emulsifier- အစာတွင်ပါရှိသည့်အဆီဓာတ်ကို ကောင်းစွာချေဖျက်နိုင်ရန် ကူညီပေးသဖြင့် လေလွင့်မှုပမာဏ မရှိသလောက်နည်းပါးပြီး ခန္ဓာကိုယ်မှ M.E ပိုမိုရရှိစေသဖြင့် FCR နှုန်း ကောင်းမွန်ပြီး ကြီးထွားနှုန်း၊ ကြက်ဥ ဥနှုန်း တိုးတက်စေသည်။
ကြက်ငယ်/ကြက်လတ် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 150 gm နှုန်း။
ဥစားကြက်/ မျိုးကြက် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 200 gm နှုန်း။
အသားစားကြက် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 500 gm နှုန်း။
ဝက် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 0.5 to2Kg နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ -5Kg ထုပ်
Amino Chelated Elements, Zinc, Manganeso, Copper, Iron , Chromium, Iodine as E.D.D Iodine, Selenium (Yeast Base), Amino Acid Content
Organic Trace Minerals - ပုံမှန်အားဖြင့်အစာတွင်ပါရှိသော သတ္တုဓာတ်များမှာ 30% လေလွင့်မှု ရှိပါသည်။ ယင်းသတ္တုဓာတ်တို့ကို Amino Acidဖြင့် ငုံစေ၍ အစာတွင် ရောစပ်ပါက လေလွင့်မှုမရှိသလောက် နည်းပါးသဖြင့် သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးစီ၏ သက်ဆိုင်သော အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ပိုမိုတိုးပွားစေသည်။
မျိုးကြက် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 1 Kg နှုန်း။
ဥစားကြက်၊ အသားတိုးကြက် - အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 500 gm နှုန်း။
Gain from every grain.
A Blend of Acid Protease,a- Amylase , Cellulase, Phytase, Xylanase
အစာတွင်ပါရှိသော ကဆီဓာတ်၊ အသားဓာတ်နှင့် အဆီတို့ကို ချေဖျက်နိုင်စေသော အထူးပြုပစ္စည်းများ ဖြစ်ပါသည်။
အစာ တစ်တန်လျှင် ဆေး 500 gm နှုန်း။
ထုပ်ပိုးပုံ - 10 Kg ထုပ်